Aad iPhone ma ah qalab mobile jabin karin oo aan la waxyeelayn kara, oo wax badan oo ka mid ah dadka isticmaala ay waajahaan arimo caadi ah in iyagu ma ay ogayn dhici lahaa iPhone. Mid ka mid ah arrimaha ugu badan ee aad u muujiso doonaa jeer ugu, waa dhibaatada echo. Dhibaatada echo waa dhibaato keena user iPhone in ay is maqlaan markii samaynta call a qof kale. Tani waa arrin aad u dhibsado keeni kara dadka isticmaala ku darafka kale inay dhibaato maqalka ah waxa aad ku leh sidoo kale oo suurto gal ma aha in la maqlo waxa aad ku leh haba yaraatee. Si loo xaliyo dhibaatada iPhone echo aad u baahan tahay si ay u qaataan in ay farsamo ama ka daadanayo adigu xalin la tallaabooyinka fudud ee hoose.
Qeybta 1: dhibaato Maxaad iPhone echo dhacaya?
Waxaad weydiin laga yaabaa in adiga ama qof saaxiib ah, muxuu ugu dhibaato iPhone echo dhici in aan iPhone? Oo ay heli jawaabo ah. Laakiin waxaa jira tiro ka mid ah sababaha ay dhibaato iPhone echo laftiisa dhiibo.
Sababta ugu horeysay waxay noqon kartaa arrin soo saaraha ah. Waxaad ka iibsan kartaa iPhone iyo bilowdo dhibaato echo isla maalinta la iibsaday, kaas oo tilmaamay in uu jiro qalad ah oo ku saabsan dhamaadka saarayaasha. Iyada oo dhibaato echo keena saaraha, waxaa jira in yar in ay wax aad samayn karto si aad u hesho iPhone shaqeeya dhammaataan aan dhibaatada echo dhibsado. Qaar ka mid ah qeybo ka iPhone iyo qalabka ay yeelan karaan cilado in sidoo kale keenaysaa in dhibaatada echo markii user la isticmaalayo qalab si uu u sameeyo call a.
Kale oo ka duwan arrinta soo saaraha ah user iPhone la kulmi karaan dhibaatada echo dhibsado marka headset Apple iPhone ku dheggan yahay qalabka. Headset ayaa bartey sababa faragelinta la qalab keenaysay in ay siin off dhibaato echo kaas oo noqon kara mid aad u xanuun badan in ay dhegaha user ee jeer. Waxa kale oo aad ay ogaadaan in laga yaabo in arrinta echo mararka muujiso karaa oo kaliya marka aad isticmaasho headset iPhone iyo jeer kale taleefanka si fiican u shaqeeyaa. Tani waxaa sababa arrin la dekedda headphone on iPhone ah.
IPhone in ay soo gaareen biyo badan ama dareere ah iyo waxaa weli ka shaqeeya la kulmi karaan dhibaatada echo caadi ah. IPhone ayaa laga yaabaa dhacay balli biya ah oo weli ka shaqeeya laakiin wax yar ma ogtahay in biyaha keeni kartaa in dhibaatooyinka echo. Sababta sababta ay taasi dhacdo waa in beeraha korontada ee iPhone-ka oo ay saameeyeen biyaha ayaa tuumbo socdo gudaha guddiga circuit telefoonka ee. Tani waxay saameyn ku yeelan doontaa ku hadla iyo Mic ee iPhone-ka dibna waxay keeni in arin dheeraad ah echo markii wicitaanada tusaale ahaan.
Sidee si ay u xaliyaan arrimaha echo iPhone
Kuwani waa tallaabooyinka ay tahay in aad qaadato marka la isku dayayo in la xaliyo dhibaatada iPhone echo. Dad badan oo dadka isticmaala la kulma dhibaatooyin echo ee ay wajahayaan intii lagu jiray baaqyo iyo jeer ugu qiyaastii 2 daqiiqo ama si gelin yeedho. Soco leh tilmaamaha hoos ku qoran si ay go'an arrinta.
Talaabada 1: gabee hadalka iyo iska - Sida ugu dhakhsaha badan ee aad haysato dhibaatada echo la qalab aad, noqon function afhayeenka qalabka iyo off iyo tan ku meel gaar ah iyo mararka qaar si joogto ah loo xaliyo arrinta. Si aad u dami function afhayeenka, marka in call a saarto shaashadda ka wejigaaga, oo waa inay noqdaan shiday-up si aad u aragto yar in-call walxood. Waxaa jiri doona icon la afhayeenka ah iyo qaar ka mid ah baararka yaryar oo la mid ah mid ka mid ah on a computer daaqadaha yihiin. Dooro icon laba jeer ku yaal oo dami. Tani xaliyo arrinta echo u badan tahay in hab ku meel gaar ah laakiin dadka qaar waxa ay si joogto ah go'an doonaa dhibaatooyinka echo. Haddii aad u ogaato waxaa ku meel gaar ah ka dibna waxaad u baahan tahay si ay u tagaan in aan xoojinno 2 ilaa waxoogaa ka badan dhibta arrinta.
Talaabada 2: ka qalab saar headset - Waxa soo socda aad doonayso in aad qabato si ay u xaliyaan dhibaatada echo aad iPhone, waa in meesha laga saaro headset ku xiran ka qalab. Waa arrin la og yahay in mararka qaar headset ka faragalin ku samayn kara baaqyo iyo soo saaro arrinta echo in aad la kulantid. Haddii aad ka saarto headset iyo dhibaatada ay weli sii socoto markaas waxa la joogaa wakhtigii si ay u tagaan in aan xoojinno 3 meesha wax noqon doonaan in ka badan wax yar ka walaacsan tan iyo qalabka aan u shaqayn doonaa fiican u socdaan.
Talaabada 3: reboot - Doorashada reboot awood badan! Haa aad si sax ah u akhri, marar badan aad iPhone mari karo dhibaato iyo aad hesho si xumaaday iyo demi ama reboot qalabka iyo markaas waxa layaab bilaabo mar kale ka shaqeeya. Marka la kulma arrimaha echo la qalab aad waxaa macquul ah in aad u hagaajin doonaa arrinta by fulinaya reboot ka mid ah qalabka. Marka aad si guul leh ku samayn tan, waxaad markaas waa inuu isku dayaa inuu sameeyo wicitaan oo loo arko haddii aad arrinta fadhiya. Haddii aan la cayiman, waxaad isku daydaa inaad talaabo afar taas oo ah xalka ugu danbeeya, dabcan.
Talaabada 4: Factory Recovery / Dib u celi - Tani waa tallaabada ugu dambeysa oo kama dambaysta ah ee saxidda dhibaato echo iPhone in aad la kulma. Fadlan ha isticmaalin tallaabo haddii aad ogtahay waxa aad samaynaysid oo weliba u badan tahay inay lumiso wax walba oo ku saabsan qalab aad mar aad ku samaysay talaabo si ay dib qalab aad in goobaha warshad aad. Resetting qalab waa habka ugu wanaagsan ee suurto gal ah si aad u hesho in si mar kale ka shaqeeya dib. Haddii doorasho dib warshad loo isticmaalo iyo qalabka weli uma shaqeeyo, waa mid aad u macquul ah in ay jirto wax dhibaato ah oo hardware joogo qalabka sidaa tahay yeelan doontaa in aad u qaadato si ay u soo saaraha ama ka ganacsada shahaado.
Si aad dib iPhone, si loo hubiyo in waxa la shaqeeya iyo dedeg ah menu goobaha ugu muhiimsan ee telefoonka adiga oo riixaya icon goobaha in aragtida barnaamijyadooda. Ka dib, Waxan aad samaysay markaas dooran kartaa fursadaha guud ka dibna button dib dhamaadka bogga in aad si toos ah u. Hadda oo aad samaysay waxa aad ka arki doonaa, qaar ka mid ah fursadaha shaashadda, sidoo kale ay doortaan, masixi content oo dhan iyo goobaha ama masixi goobaha oo dhan. Fadlan la soco in xilligan la joogo waa adiga, haddii aad dooneyso in aad tirtirto wax walba oo ka soo xusuusta iPhone. Haddii aad sameysay gurmad ah ka dibna waxaad sii wadi kartaa in ay masixi content oo dhan iyo dhammaan goobaha kaas oo ah habka ugu wanaagsan si ay u soo celin telefoon dib warshad cusub.
Waxaa sidoo kale jira hab kale oo aad taa sameyn kartaa. Waxaad ku xidhi kartaa iPhone in aad PC ama Mac iyo bilowdo barnaamijka Lugood ah. In Lugood waxaad yeelan doontaa fursad u dib qalab aad la mar guji. Dul xulashooyinka dooro qalab dib. Sug ilaa habka la soo gabagabeeyo ka dibna reboot qalabka.
Taasi waa! Ka dib markii isku dayaya kor ku xusan oo dhan si taxadar leh in tallaabo by habka tallaabo waa in aad leedahay arrinta iPhone echo gebi ahaanba la xalin haddii ay jirto arin hardware la qalab aad ah. Marka aad garowsato in mid ka mid ahaa ee kor ku xusan ka shaqeeya waxa la joogaa wakhtigii si ay u qaadato iPhone inay soo saaraha ama ka ganacsada shahaado in la bedelay ama refurbrished.
> Resource > iPhone > Sida loo xaliyo dhibka Echo iPhone